कम्प्युटरमा डाटा हराउनबाट बच्न समयमै होस् पुर्याउनुहोस् यसरी (use Crystal Disk Info) | ''Knowledge Never Ends''
कम्प्युटरमा डाटा हराउनबाट बच्न समयमै होस् पुर्याउनुहोस् यसरी (use Crystal Disk Info)
“Crystal Disk Info”
कम्पुटरको कुन् चै हार्डवेयरमा यदि समस्या आयो भने तपाईलाई सबै भन्दा बडी चिन्ता लाग्छ ? पक्कै पनि हार्ड­डिस्क नै होला । किनभने तपाइको सम्पूर्ण महत्वपुर्ण डाटाहरु त्यसैमा राखिएको हुन्छ । यसको एउटै मात्र उपाय भनेको आफ्नो अति महत्वपुर्ण डाटा हरुलाई कुनै एक्सटर्नल डिस्कमा राख्नु हो । हार्ड­डिस्क हरु जुन बेला पनि बिग्रन सक्छ । त्यसैले समयमै होस पुर्यायो भने डाटा हराउनबाट बच्न सकिन्छ ।
कुनै पनि चिजले ­ म बिग्रिन लागे छिटो केहि गरि हाल्नुहोस भनेर त पक्कै भन्दैन होला । तर एति कुरा जानी राख्नुहोस कि हार्ड­डिस्कहरुले यसो भन्न सक्छ । हरेक हार्ड­डिस्क हरुमा स्मार्ट टेक्नोलोजी (SMART) अर्थात् सेल्फ मोनिटरिङ्ग, एनलाइसिस् एण्ड रिपोर्टिंग टेक्नोलोजी हुन्छ । यो टेक्नोलोजीले हार्ड­डिस्क कतिको भरपर्दो आवस्थामा छ र बिग्रिन लागेको हो वा होइन भनेर डाटा तयार गर्छ । यो डाटा हेरेर हार्ड­डिस्कमा समस्या देखिन थालेको छ या छैन अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर दुर्भाग्य बस् विन्डोजमा यो डाटा सजिलै हेर्न मिल्ने आफ्नै टुल भने छैन । यसको लागि क्रिस्टल डिस्क इन्फो नाम गरेको उपयोगी ओपन सोर्स सफ्टवेर रहेको छ । यो सफ्टवेर इन्स्टल गरिसके पछि ओपन गर्नु होस् र डाटा हेर्नुहोस् । यदि तपाइँको हार्ड­डिस्क सहि अवस्थामा छ भने हेल्थ स्टाटसमा गुड देखाउछ । यसले तपाइको हार्ड­डिस्कको टेम्प्रेचर र हार्डवेयर इस्पेसिफिकेसन पनि देखाउछ ।
यदि तपाईलाई सधैंभरि हार्ड­डिस्क चेक गरिराखोस् भन्ने चाहनु हुन्छ भने फङ्गसन मेनुमा गएर रेसिडेन्ट क्लिक गर्नुहोस । यदि हार्ड ­डिस्कमा कुनै समस्या आयो भने तपाईलाई पप अप नोटिफिकेसन दिन्छ । यो सफ्टवेर निसुल्क डाउनलोड गरेर चलाउन सकिन्छ ।
त्यसका लागि यहाँ – http://crystalmark.info/download/index-e.html बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
← पोर्चुगलको लिस्बनमा चाँडै कन्सुलर सेवा
सुत्दा घुर्ने बानी छ ? घुराइ बानी होइन, रोग हो →